Aiza ireo lalao vaovao amin'ny Apple Arcade? | Avy amin'ny mac aho
Aiza ireo lalao vaovao amin'ny Apple Arcade?
Mazava fa ny lalao Apple dia tsy sariaka loatra ary mandritra ny fotoana kelikely ny orinasa Cupertino dia tsy manampy lalao amin'ny sehatra Apple Arcade. Amin'io lafiny io Tamin'ny 2 aprily, ny orinasa dia nandefa andiana lalao vaovao ary nanomboka teo dia tsy nanampy intsony.
Tamin'io andro io dia nanambara ny orinasa Cupertino fa hanampy lalao vaovao 30 amin'ny serivisy i Apple Arcade ary izany no fomba nanaovana azy., mahazo lalao 180 eo ho eo. Saingy nanomboka tamin'io fotoana io dia toa nijanona ny paikadin'i Apple miaraka amin'ity serivisy Apple Arcade ity ary na dia mampiroborobo lalao vaovao maro aza izy ity ho "Coming Soon" dia tsy tonga ara-dalàna izy ireo.
Mety aorian'ny volana maromaro tsy misy hetsika dia hitohy rahampitso ny vaovao
Manomboka ny zoma 4 jona, ‌Apple Arcade‌ dia andrasana hamerina ny fahatongavan'ireo lalao vaovao amin'ny serivisy aorian'ity vanim-potoana izay tsy nahitantsika vaovao ity. Ity no farafaharatsiny izay hevitr'izy ireo avy amin'ny tranonkala malaza MacRumors.
Ao amin'ny Tranonkalain'i Apple manokana Nolazain'izy ireo taminay fa manampy lalao isan-kerinandro izy ireo saingy tsy izany no izy satria amin'ity tranga ity dia tsy nanana vaovao nandritra ny fotoana fohy isika na eo aza ny zava-misy voalaza ny fahatongavan'ilay lalao: Solitaire, Inks, Frenzic Overtime na Legends of Kingdom Rush ankoatry ny hafa ...
Apple Arcade dia mamoaka lohateny vaovao sy fanavaozana atiny isan-kerinandro. Azonao atao ny mahita ireo famoahana ho avy ao amin'ny fizarana Coming Soon ao amin'ny vakizoro Arcade ao amin'ny App Store.
Ity serivisy lalao streaming ity dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 2019 ary toa tena tsy dia mahomby amin'ny mpampiasa izany ho an'ny Mac, iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ary Mac amin'ny 4,99 euro isam-bolana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Games » Aiza ireo lalao vaovao amin'ny Apple Arcade?